I-Hay Loft e-Heads Hill Farm - I-Airbnb
I-Hay Loft e-Heads Hill Farm
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Andy
U-Andy Ungumbungazi ovelele
Ibekwe epulazini langaphambili lobisi, emngceleni weBerkshire/Hampshire, iHay Loft iyifulethi lesitudiyo esinesitezi sokuqala esisanda kuguqulwa esiqedwe saba sezingeni eliphakeme kakhulu. Ngokubuka kwe-Watership Down, i-Hay Loft iphuma emzileni wezwe othule oholela ngqo endaweni yokulondoloza imvelo iGreenham Common; inikeza ukuphumula, indawo yasemakhaya. Ilungele abagibeli bamabhayisikili, abaqwali kanye nabathandi bemvelo, indilinga yekite ebomvu phezulu, izinyamazane ziyazulazula futhi sinephigogo lendawo elithambile! Eduze ne-Highclere Castle, i-Newbury Racecourse.
Iqedwe ngo-Ephreli 2021, isakhiwo sangaphambili sepulazi saguqulwa saba i-Old Dairy esitezi esiphansi kanye ne-The Hay Loft ngaphezulu. Womabili amafulethi abelana ngegumbi lokungena eliphansi futhi angabhukwa ndawonye lapho uhlangana nabangane noma izihlobo. I-Old Dairy ikleliswe ukuhlalisa abantu abangafika kwabangu-4.
Endaweni ephakeme, i-Hay Loft ithokozela ukubukwa kwaseningizimu phezu kwezingadi ezinhle ezine-Watership Down kude. Indawo yangaphakathi ilula futhi inomoya futhi ifudumele futhi ithambile, inohlelo lombala opholile, ukufudumeza kwangaphansi nokukhanya kwesimanje.
Izinsiza zihlanganisa umbhede olingana inkosi, usofa wezihlalo ezi-2, ibha yebhulakufesi ye-quartz, ikhabethe le-USB elakhelwe ngaphakathi, i-WiFi, izindawo zokushaja ze-USB, ifriji, umshini wokugeza izitsha, i-microwave combi-oven, ihhabhu, iketela, i-toaster, ijeke yesihlungi samanzi, izitsha, izinto zokusika, izitsha, okomisa izinwele, insimbi, iziphanyeko, ilineni namathawula.
Iphakethe lokwamukela elihlanganisa ubisi, itiye, ikhofi, ushukela, usawoti, upelepele, insipho, ishampu, amaphilisi okugeza izitsha.
Indlela elula yokungibamba cishe kuzoba ukuthumela umlayezo ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb.
UAndy Ungumbungazi ovelele